'Mashoko Okufanotaura' anouya kuMicrosoft Outlook yeIOS uye Android mwedzi unouya
October 27, 2021 by Justin26
Microsoft yakange iine email auto-complete feature paOutlook.com kubvira May 2020, uye yakabudiswa kuOutlook Desktop mukupera kwa 2020. Microsoft ikozvino yakasimbisa kuti fungidziro yemavara iri kuuya kuOutlook yeIOS neAndroid muna Mbudzi. Microsoft inoti yavo yekufungidzira mameseji maficha acharatidza iwo mameseji aungade kutaipa anotevera zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye muchina kudzidza uye… [Verenga zvakawanda ...] nezve 'Text Predictions' inouya kuMicrosoft Outlook yeIOS uye Android mwedzi unouya
Ndeupi ruvara Samsung Galaxy Watch 4 yaunofanira kutenga?
October 26, 2021 by bartez64
Kwemwedzi mishoma inotevera, Samsung yave kuda kubata yakasarudzika pamusika weApple smartwatch. Iyo Samsung Galaxy Watch 4 ndiyo yekutanga wachi yekumhanyisa Wear OS 3 itsva, uye nekudaro, ndiyo yekutanga Galaxy Watch ine mukana weGoogle masevhisi uye Android apps kuburikidza neGoogle Play. Izvi zvinosimudzira sarudzo yeapp uchiri kuchengeta Samsung dhizaini flair (inonzi Imwe UI… [Verenga zvakawanda ...] nezve Ndeupi ruvara Samsung Galaxy Watch 4 yaunofanira kutenga?
Fossil Gen 6 ongororo: Pedyo ipapo
October 26, 2021 by Justin26
Zvinoita sezera kubvira fashoni brand, Fossil, yakatanga kupinda mumusika we smartwatch. Mune dzimwe nzira yaitoonekwa semuponesi weGoogle Wear OS system yekushandisa. Pamwe chete nemhando dzayo dzakati wandei - dzinosanganisira Diesel, Skagen naMichael Kors - Fossil Group yakaburitsa smartwatches yaiita kunge wachi chaiyo. Kusiyana neaya akatangwa neakawanda eiyo hombe-zita tech… [Verenga zvakawanda ...] nezve Fossil Gen 6 wongororo: Pedyo ipapo
Google inotsanangura Android 12's itsva Internet Panel, inoti 'inonyanya kunzwisisika'
Dzimwe shanduko dziri kuuya nePixel Feature Drop itsva. Izvo zvaunoda kuziva Google inoedza kutsanangura maitiro ekufunga kuseri kwayo itsva Internet tile muKurumidza Settings. Google inoti yaive mhedzisiro yezvidzidzo zvinoratidza kuti iyo UI nyowani inobatsira kudzivirira yakawandisa nharembozha kushandiswa. Google inoronga kuwedzera dzimwe shanduko nePixel Feature Drop iri kuuya. Android 12… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle inotsanangura Android 12's itsva Internet Panel, inoti 'inonyanya kunzwisisika'
Maitiro ekupinda muWhatsApp account yako palaptop/PC
WhatsApp ndeimwe yeanonyanya kukosha uye akakurumbira mameseji mameseji. Kuita kuti zvive nyore kune vashandisi kushandisa iyo app pane zvishandiso zvisiri zvema smartphones, ivo zvakare vane sarudzo yekuishandisa palaptop uye / kana PC kuburikidza neWhatsApp Web. Chaunongoda chete internet yekubatanidza uye wagona kuenda. Kuti upinde muWhatsApp account paWhatsApp Webhu, WhatsApp Desktop, kana Portal pa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekupinda muWhatsApp account yako palaptop/PC
Google's Pixel Call Screen inoratidzira kubuda muUK
Google nguva pfupi yadarika yakazivisa zvitsva zvemberi zvekufona zveGoogle Pixel 6 uye Pixel 6 Pro zvishandiso muUS zvakagadzirirwa kubata zvirinani nevanofona spam uye kufona mabhizinesi. Kugamuchira mafoni kubva kunhamba dzisingazivikanwe kunodhonza. Kana iwe ukawana runhare kubva kunhamba isingazivikanwe, Google's Call Screen inokubatsira kuti uone kuti ndivanaani uye nei vari kufona usati watora. Yavo… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle's Pixel Call Screen inoburitswa muUK
Iyo Sony Xperia Pro-Ini ndinogona kupfura 4K/120, yakanangwa kune vanobudirira uye vanogadzira
Sony yakazivisa inotevera mumutsara wayo wehunyanzvi kutora mafoto / videography centric smartphones, uye inonzi Xperia Pro-I. Nenzira dzakawanda ndiyo Sony Xperia 1 III - iyo yakatanga kutanga gore rino - asi nemuviri mutsva uye kamera yakasimudzwa zvakanyanya uye inodziya system. Iyo yekutanga kamera kuseri inoratidzira yakafanana 1.0-mhando Exmor RS sensor inoshandiswa mu… [Verenga zvakawanda ...] nezve The Sony Xperia Pro-Ini ndinogona kupfura 4K/120, yakanangwa kune vanobudirira uye vanogadzira
Chii chitsva muPixel 6 Pro kamera?
Iyo Google Pixel yakagara iine mukurumbira wemifananidzo yakanaka kwazvo. Kubva pakatanga mudziyo wekutanga muna 2016, chero chaunofunga nezvemafoni eGoogle - kana kutaura chokwadi Android - iyo Pixel yanga iri chirevo chekamera huru. Kune vamwe izvo zvave kuvhiringidza: Google yakanamatira neakafanana ma sensors uye zvakanyanya zvakafanana chiitiko pane ayo mafoni kune akati wandei makore. Nepo vamwe vakasvetuka… [Verenga zvakawanda ...] nezve Chii chitsva muPixel 6 Pro kamera?
Realme 9 Pro Plus yakaonekwa pane IMEI dhatabhesi; inogona kutanga pamwe chete neRealme 9, Realme 9 Pro
October 23, 2021 by billy16
Yakakwirira Realme 9 Pro Plus yakaonekwa pane IMEI dhatabhesi. Iyo smartphone inogona kuvhurwa pamwe chete neiyo Realme 9 uye Realme 9 Pro. Realme 9 yakatevedzana yakarongerwa kutanga kutanga kwa2022. Neiyo Realme 9 yakateedzana yakasimbiswa kutanga muna 2022, mafoni ari kuuya eakamirirwa zvakanyanya akapedzisira atanga kurova mamwe mawebhusaiti etifiketi. Zvino, maererano… [Verenga zvakawanda ...] nezve Realme 9 Pro Plus yakaonekwa pane IMEI dhatabhesi; inogona kutanga pamwe chete neRealme 9, Realme 9 Pro
Huawei P50 akatevedzana anonzi achatanga pasi rose kutanga kwegore rinouya
Highlights Huawei ichaburitsa ese P50 uye P50 Pro pasi rose kutanga kwegore rinouya. Midziyo iri kuuya kubva kumhando ichauya ichifambiswa neHuawei's Harmony OS. Mafoni ese ari maviri kubva kuHuawei anofambiswa neQualcomm Snapdragon 888 chipset. Huawei yakatanga mureza wayo P50 akateedzana emafoni kutanga gore rino muChina. Ose ari maviri Huawei P50 uye P50 Pro aive… [Verenga zvakawanda ...] nezve Huawei P50 akatevedzana anonzi anotanga pasi rose kutanga kwegore rinouya
Peji Inotevera »
Rongedza ISDone.dll error, Unarc.dll yakadzoka mhosho yekombiji yenzira Windows 10
5G Amazon Alexa Amazon Moto Apple TV Autofill zvikuru Black Shark 3 Blog Kudevedzwa pabasa kambani mhepo mvura nenzvimbo F1 2020 Facebook fashoin FIFA 21 chikafu Free software Galaxy Note 20 Halo Infinite pamahedhifoni iPhone Laptop LastPass macOS magazini MediaTek Microsoft Microsoft 365 Microsoft Edge Microsoft Surface Duo Microsoft Team mumhanzi Nest Hub Netflix itsva OneDrive OnePlus Maodzanyemba Pasiwedhi Zvirongwa (Windows) Kuchenesa Tool Software widget zvigadzirwa Vpn Windows 10 wireless earbuds
Username kana Email Address